Camera ပိုင်းနဲ့ System ပိုင်းအချို့ကို Update လုပ်လိုက်တဲ့ One Plus 5T! – AsiaApps
One Plus 5T ရဲ့ Version အသစ်ဖြစ်တဲ့ OxygenOS 4.7.6 OTA ဟာလွန်ခဲ့တဲ့ ရက်အနည်းအငယ်က မှထွက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Version အသစ်မှာတော့ Camera ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ System ပိုင်းဆိုင်ရာကို Update လုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Camera ပိုင်းမှာဆိုရင် Stability အပိုင်းကို ကောင်းအောင် update လုပ်ထားတာကြောင့်တော့ camera ရိုက်တဲ့အခါမှာ ပိုပြီးတည်ငြိမ်နေတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ Clarity improvement ကြောင့် Selfie ကိုအလင်းရောင်နည်းပါးနေတဲ့အချိန်မှာရိုက်ရင်တောင် ကြည်လင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက Third Party camera apps တွေဖြစ်တဲ့ Camera 360, Focus အစရှိတဲ့ Application တွေကို အသုံးပြုရာမှာလည်း ပိုပြီးအဆင်ပြေအောင် update ပြုလုပ်ပေးထားပါသေးတယ်။
System အပိုင်းမှာဆိုရင်လည်း Face unlock Feature မှာ assistive lighting ကိုထည့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ Expanded screenshot နဲ့ Wifi display ပိုင်းကိုလည်း ပိုပြီးအဆင်ပြေအောင်ပြုလုပ်ပေးထားသေးတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီဇင်ဘာလအတွက် Android security patch ကိုလည်း update လုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ update က 86MB သာရှိပါတယ်။ 86MB ကို update လုပ်လိုက်ခြင်းဖြင့်အပေါ်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ Feature အသစ်တွေကိုထိတွေ့ခွင့်ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
One Plus အနေနဲ့ဒီ update ကိုပြုလုပ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကတော့ customer feedback တွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တော့ One Plus company ကထွက်ရှိထားတဲ့ ဖုန်းတွေကိုသုံးစွဲသူတွေအနေနဲ့ မိမိလိုချင်တဲ့ feature ကို feedback သွားပေးပြီးပူဆာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ 😛
That’s not good to hear, Dhruv. We are pushing out the incremental roll-out of OxygenOS 4.7.6 OTA for the OnePlus 5T https://t.co/q2o0v64VRJ. Kindly update and check how it goes.
— OnePlus Support (@OnePlus_Support) December 29, 2017
Firmware Updates, One Plus, Smartphone